Wax kasta oo ku saabsan Trestolone Acetate (MENT)
1.Waa maxay Trestolone Acetate (MENT)? 2. Sidee ayay Trestolone Acetate u shaqaysaa?
3. Isticmaalka Trestolone Acetate (MENT) Qiyaasta 4.Trestolone Acetate (MENT)
5.Trestolone Acetate (MENT) nolosha nuskeed 6.Trestolone Acetate (MENT) wareegga
Natiijooyinka 7.Trestolone Acetate (MENT) 8.Trestolone Acetate (MENT) gooynta
9.Trestolone Acetate (MENT) ee bullying 10.Trestolone Acetate (MENT) faa'iidooyin
11.Trestolone Acetate (MENT) faallooyinka 12.Trestolone Acetate (MENT) budo iib ah
13.W Halkee laga iibsan karaa budada Trestolone Acetate (MENT)
1.Waa maxay Trestolone Acetate (MENT)?
Trestolone Acetate (MENT) CAS 6157-87-5, oo sidoo kale loo yaqaan a7 alpha-methyl-northestosterone (budada MENT) waa steroid isku-darka oo aad u xoog badan oo xitaa ka xoog badan testosterone. Steroid-ka waxaa loo isticmaalaa ujeeddooyinka dhisidda iyo sidoo kale tababarka xoogga. Steroidkani wuxuu leeyahay awood loo istcimaalo tillaabooyinka ka hortagga uurka ee lab. Steroidku wuxuu dhaliyaa dhalmo ku-meel-gaar ah ragga haddii lagu maareeyo tiro ku filan.
Trestolone Acetate (MENT)6157-87-5) waxaa la rumeysan yahay inuu toban jeer ka awood badan yahay testosterone, taasna waxay keentay inuu sumcad wanaagsan ku soo qaatay sanado badan. Waxaa lagu qaataa habab kala duwan sida budo ama duris. Steroid Tani waxay aad ugu faa'iido badan tahay kuwa culeyska qaadaya ee xoojiya bodybuilders iyaga oo rajeynaya inay helaan natiijooyin wanaagsan iyagoo isku daraya steroidka iyo cuntooyinka jimicsiga iyo sidoo kale kaabisyada.
2. Sidee ayuu Trestolone Acetate u shaqeeyaa?
Trestolone Acetate (MENT) CAS 6157-87-5 waxay ka caawisaa bodybuilders inay kordhiyaan tirada muruqyada isla markaana ay yareeyaan dufanka isla waqtigaas. Si loo gaaro natiijooyinka ugufiican, steroid waxaa lagu dari karaa xoojiyayaasha kale adkeynta iyo goynta jirka. Steroidku wuxuu sababa dhalmo la'aan kumeel gaar ah isagoo ka hortagaya in gonadotropins laga sii daayo qanjirka 'pituitary gland'.
Steroid-ka ayaa sidoo kale xannibay sii-deynta gonadotropins, follicle oo kiciya hormoon, iyo hormoonnada luteinizing xitaa xaddiga yar. Hormoonka kiciya hoormoonka (FSH) iyo hormoonnada Luteinizing (LH) ayaa looga baahan yahay howsha shahwada, taas oo lagu tijaabiyo soo-saarka shahwada.
Markii sii-deynta LH iyo FSH la xakameeyo, shahwada shahwada ma dhacdo. Xakameynta LH waxay carqalad ku tahay soosaarka shahwada iyo xayiraadda wax soo saarka testosterone, sidaa darteed madhalaysnimo. Budada MENT waa daaweyn ku filan bedelka inta badan howlaha ku tiirsan androgen. Dib u eegis qoto dheer ee Superdrol (Methasterone) oo loogu talagalay jirka dhismaha
3. Isticmaalka Trestolone Acetate (MENT)
Si ka duwan kuwa kale ee steroids anabolic-ka ah ee lagu leeyahay sumcadooda ganacsatada suuq madow ama ka sarreeysa shirkadaha kaabayaasha ah ee la iibsado, Trestolone Acetate ayaa leh sumcaddeeda caafimaad sharci ah, cilmi-baaris cilmiyeysan oo ka dhigtay mid aad caan uga ah bulshooyinka dhiska. MENT waxaa markii ugu horreysay la soo saaray 1960s
Dhawaan, Schering, oo ah shirkad dawada ku saleysan cilmi baarista iyo Golaha Dadweynaha ayaa horumar ka sameeyay samaynta steroidkan ka dib baaris ay ku sameeyeen steroid this ujeeddooyin ka mid ah daaweynta xakameynta dhalmada lab iyo weliba bedelka hoormoonka. Shirkadahaani waxay heleen astaamo kala duwan oo leh steroid ku habboon dhisitaanka jirka. Ka sokow, steroidkani waa mid si weyn waxtar ugu leh daaweynta androgen ee lagu beddelo.
Waxa kale oo aan ahayn kahortaga uur-qaadida iyo ka-hortagga androgen-ka iyo ka-hortagga uur-qaadida, sida diyaarinta intramuscular-ka ama sida transdermal-ka, waxaa jira Trestolone Acetate kale (DAQIIQADII) isticmaalka waxaa ka mid ah hypogonadism-ka asaasiga ah, bidaarta, luminta qaybta lafaha, kansarka qanjirka 'prostate', testicular failure, BHP, ASIH, sarcopenia, cachexia iyo luminta muruqyada iyo sidoo kale xoojinta isboortiga iyo dhismaha jirka.
Qiyaasta 4.Trestolone Acetate (MENT)
Maaddaama MENT loogu ganacsadeyn daroogo ahaan, ma jirin horumarin gaar ah Qiyaasta daawada Trestolone Acetate (MENT) tilmaamaha steroid. Ahaanshaha steroid aad u awood badan, qaadashada yar waxay waxtar u yeelan doontaa jir dhiska. Daraasadaha qaar ayaa muujinaya in dawadu ay toban jeer ka awood badan tahay testosterone isla markaana ay xakameyso shahwada oo loo yaqaan 'spermatogenesis labaatan jeer ka waxtar badan' testosterone.
Natiijo ahaan, qiyaasta ka hooseysa 10mg (inta badan 3-16mg) maalin kasta waxay waxtar u yeelan doontaa bilowga hore. Cirbadaha saliida ku saleysan ee dawadan waxaa loo qaadan karaa si ku dhow 10-20mg iyadoo ay u dhaxeyso labo ilaa seddex maalmood. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inay tixgeliyaan qiyaasta qiyaasta ah ee ka badan 10mg maalin kasta natiijooyinka Trestolone Acetate (MENT) wanaagsan maxaa yeelay waxtarka daawada ma ahan dadka oo dhan.
Dad kaladuwan ayaa heerar kala duwan u leh dareenka guryaha daroogada iyo estrogenic-ga. Qaadashada xad dhaafka ah si kastaba ha ahaatee laguma talinayo maxaa yeelay waxay u horseedi karaan waxyeelo daran.
Isticmaalayaasha khibradda leh ee Trestlone ayaa isticmaali kara qiyaasta 20-50mg maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, tani way ku kala duwanaan kartaa iyadoo kuxiran foomka loo qaatay. Tusaale ahaan, foomka la isku duro ayaa laga yaabaa inuu waxyar ka hooseeyo qaababka transdermal iyo afka. Xaaladaha badankood, hase yeeshe, dawadan afka lagu maa siiyo; irbadaha iyo xalalka transdermal waxaa lagula talinayaa sida ugu wanaagsan ee loo qaato dawadan. Si loo yareeyo waxyeelada estrogen iyo prolactin side effects, waxaa lagugula talinayaa in la isticmaalo istroolka leh astaamaha 'prolactin inhibitors' sida Cabergoline iyo aromatase inhibitor sida Arimidex.
Qaar ka mid ah adeegsadayaasha khibrada leh ayaa laga yaabaa inay qaataan qiyaasta 50-75mg maalin kasta wareega wareega toddobaadyada 4. Isticmaalayaashani waa inay u kala qaybiyaan qiyaasta laba qaybood, taas oo ah, ka hor hurdada iyo mid kale ka dib markii ay toostaan. Khubaradu waxay qaadan karaan qaddarka illaa 75-100mg. Qiyaasta noocaas ah waxaa loo kala qaybin karaa saddex qaybood, sida hoose lagu muujiyey:
Kahor hurdada ama habeenkii - 25mg
Hab loo wada dhan yahay ayaa lama huraan u ah marka la qaato qiyaasta daawada Trestolone Acetate iyo natiijooyinka waxtarka leh. Mid ka mid ah, sidaas darteed, wuxuu u baahan yahay inuu joogteeyo cunno wanaagsan oo loogu talagalay ciribtirka baruurta iyo ku daridda murqaha. Waa lagama maarmaan in la joogteeyo jadwalka wax ku oolka ah ee jimicsiga iyo sidoo kale adeegsiga joogtada ah kaas oo raacaya natiijooyinka qiyaasta saxda ah ee natiijooyinka waxtarka leh isla markaana yareeya waxyeelooyinka.
5.Trestolone Acetate (MENT) nolosha nuskeed
Noolaha steroid-ka-jirka ah waxaa loola jeedaa waqtiga uu qaato jirku si uu u nuugo daawada una baabi'iyo ku dhawaad ​​kalabar qaddarka la qaatay. Trestolone Acetate nus-nolosha u dhaxaysa siddeed ilaa laba iyo toban saacadood (8-12 saacadood).
Sidaas darteed, qofku wuxuu ku qaadan karaa daawada qiyaaso yar yar maalinta oo dhan, taas oo hubineysa inuu si joogto ah ugu jiro dhiigga. Qiyaastaas waxaa loo qaadan karaa labo ilaa seddex waqti maalin gudaheed. Natiijooyinka kala duwanaanshaha daroogada ee dhiigga, waxaa muhiim ah in adeegsadayaashu xisaabin karaan kala badh nolosha daroogada. Tani waxay ka caawineysaa isticmaalaha inuu ku qaato daroogada waqti ku habboon.
Haddii tusaale ahaan mid uu go'aansado inuu qaato 50mg maalin kasta, wareegga afar toddobaad, iyo mala awaal ahaan in dawadu leedahay nus-nolosha 8hours, kala duwanaanshaha uruurinta dhiigga ayaa noqon kara sida soo socota:
Qiyaasta dawadan, qofku wuxuu qaadan karaa daroogada 8-saac oo ah 25mg midkastaba. Haddii qiyaasta qaadashadu ay ka bilaabato 6 AM, fiirsashada waxay noqon doontaa 12.5mg kadib saacadaha 8 (2 PM) marka qiyaasta labaad la qaato. Qiyaasta labaad waxay ka kooban tahay 25mg, oo kor u qaadi doonta feejignaanta 37.5mg.
Sideed saacadood ka dib qiyaasta labaad (10 PM), fiirsashada waxay noqon doontaa 18.75mg. Sideed saacadood, goor dambe, waxay noqon doontaa 6 AM ee maalinta ku xigta, markii qiyaasta koowaad ee maalintaas la qaadan doono. Tani waxay ka dhigan tahay in qiyaasta ugu horreysa ee maalinta labaad la sameyn doono marka jirku uu ku urursan yahay qiyaastii 9.4mg maalintii hore.
Qaabka noocan oo kale ah wuxuu xaqiijinayaa in si isdaba joog ah sitoos ah loogu daro dhiigga ka hor iyo kadib jimicsiga. Ogaanshaha sida loo xisaabiyo Trestolone Acetate (MENT) nolosha nuskeed ee daroogada waxay ka caawineysaa isticmaaleyaasha sidii loo hubin lahaa in uruurinta n daroogada ay sare u kacday keliya xilliyada ugu adag, kuwaas oo ah kahor, inta lagu jiro iyo ka dib jimicsiga. Xisaabinta saxda ah ee Trestolone Acetate (MENT) nolosha badhkeed waxay ka caawisaa isticmaaleha inuu maareeyo qiyaasta iyo inuu gaaro natiijooyin faa'iido leh.
6.Trestolone Acetate (MENT) wareegga
Dad kaladuwan ayaa isticmaali kara wareegyada kaladuwan markay tahay qaadashada Trestolone Acetate. Tani waxay inta badan ku xirnaan doontaa khibradaha qofku u leeyahay daroogada. Midkood waa inuu fahmaa saameynta meertada ee ay gasho, taas oo ku xirnaanaysa hadafyadooda iyo ujeeddooyinkooda ka hor inta aan loo gudbin wax wareeg ah.
Markaad gasho wareegga, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo dhererka wareegga iyo sidoo kale uruurinta daroogada ee dhiigga inta lagu jiro wareegga. Hadafyada sida wanaagsan loo dejiyay, way fududahay in la doorto midka ugu habboon Wareegtada Trestolone Acetate (MENT) in loo hibeeyo. Iyadoo la adeegsanayo Trestolone Acetate, waxaa suurtagal ah in la helo natiijooyin muhiim ah xitaa wareegga laba toddobaad ah. Si kastaba ha noqotee, wareegga ugu habboon waa inuu socdaa afar illaa lix toddobaad. Tani waa wareegga habboon maxaa yeelay waxay ka horjoogsataa mid inuu ku soo boodo qiyaasta daawada.
Natiijooyinka 7.Trestolone Acetate (MENT)
Trestolone Acetate waa steroid aad u awood badan leh oo ku caan baxday saameyntooda xoogga badan. Mid ka mid ah astaamaha, sababta dad badani u tixgeliyaan steroid this, waa sababta oo ah natiijooyinkeeda wax ku oolka ah ee lagu ogaaday muddo aad u yar gudahood. Daawada waxay leedahay natiijo xoog leh dadka doonaya inay gaaraan xoojinta xoojinta dhaqsaha.
Bilowga isticmaalaya daroogadaani waxay ku heli karaan natiijooyin la arki karo xitaa haddii ay gaaban yihiin laba toddobaad oo aan xirmin. Awooddeeda sare, adeegsadayaashu waxay ka heli karaan muruqyo cajiib ah iyo natiijooyinka miisaan lumis xitaa marka la qaato qiyaas yar oo ah 3-6mg. Natiijooyinka kasbashada muruqyada ayaa sidoo kale ah muddo dheer, taas oo ka dhigaysa ciyaartooyda iyo culeyska culeysku inay si weyn u tixgeliyaan dawadan.
Dadka caadiga ah ee aan ka aheyn kuwa jir dhiska ayaa waliba u isticmaali kara dawadan inay ku gaaraan xaalad jireed oo soo jiidasho leh. Natiijooyinkaan waxaa lagu wanaajin karaa iyadoo la ilaalinayo habsami u socodka shaqooyinka wanaagsan iyo cunnooyinka habboon. Dawadu waxay siisaa isticmaaleyaasha awood dheeri ah si ay u shaqeeyaan, taas oo u baahan cunno qaadasho aad u sarreysa.
Awoodda Budada Trestolone Acetate in la xakameeyo sii-daynta steroid-ka si loo kontoroolo habka loo yaqaan 'spermatogenesis' oo dawada ka dhigaysa mid waxtar u leh xakamaynta dhalmada caafimaad ee ragga.
8.Trestolone Acetate (MENT) gooynta
Trestolone Acetate ayaa dawooyin faa'iido leh u leh dadka xiisaynaya jarida. Goynta Trestolone Acetate (MENT) waxay awood u siineysaa culeys qaadayaasha iyo jir-dhisayaasha inay yareeyaan dufanka badan ee jirkooda aysan qasab ku aheyn muruqyo fara badan. Si loo gaadho cufnaanta jirka oo leh qaabdhismeed faneed leh, Trestolone Acetate waxaa loo wada isticmaali karaa daawooyin kale si kor loogu qaado natiijooyinka wareegyada goynta Trestolone Acetate (MENT) iyada oo kuxiran natiijooyinka la doonayo iyo sidoo kale shaqsi ahaaneed borotokoolka iyo dareenka oestrogenic.
Goynta wejiyada Trestolone, qofku wuxuu ku dhejin karaa Winstrol oo leh arogati iyo udgoon sida Halotestin ama trenbolone. Isku darka noocan oo kale ah ayaa ka caawin doona mid ka mid ah inuu gaaro qeexitaan xoog leh oo jidhka ah iyo waji adag oo ay inta badan kuwa jirka dhisa ay doonayaan inay gaaraan. Shakhsiyaadka leh dareenka sareeya waxay ka fiirsan karaan inay ku daraan xeryahooda sida Deca-Durabolin, Equipoise ama primobalin markay xirxirayaan Trestolone acetate.
9.Trestolone Acetate (MENT) ee bullying
Trestolone sidoo kale waxaa lagu dhejin karaa steroids kale oo loogu talagalay bullying. Trestolone Acetate (MENT) budada budada guud ahaan waxaa loogu talagalay shakhsiyaadka doonaya inay kordhaan waxqabadka muruqyada, marwalba leh tababar joogto ah oo nidaamsan iyo jimicsiga. Badanaa, dadaallada lagu dhimayo baruurta jirka waxay kuu horseedi karaan buunbuunin tababarenimo taas oo horseedi karta luminta murqaha. Trestolone, marka lagu daro steroids ku habboon, waxay u sahli kartaa mid inuu lumiyo dufanka jirka, joogteynta iyo fududeynta helitaanka tirada muruqyada oo ay awood u siiso jirka inuu yeesho tamar iyo xoog uu ku adkeysto jimicsiga badan iyo adag.
Afduubka ayaa mararka qaar noqon kara mid aad u adag dadka doonaya inay natiijo dhakhso leh ku gaadhaan waqti aad u yar. Wadooyinka wareegaya noocan oo kale ah waxay siin karaan isticmaalaha xaddiga ugu badan ee xoogsheegashada, oo ay ku jirto haynta biyaha. Natiijooyinkan ayaa laga yaabaa, si kastaba ha ahaatee, ma sii socdaan muddo dheer. Qaar ka mid ah steroids-ka lagu dhejin karo Trestolone Acetate (MENT) ee wareegga bulking waxaa ka mid ah Dianabol, Anadrol, iyo Trenbolone.
Dianabol waa mid ka mid ah steroids-yada kaas oo si weyn loogu tixgaliyo cagajuglaynta awoodeeda si dhakhso leh wax u qabashada waxayna ku siineysaa guulo deg deg ah muddo gaaban gudaheeda. Isku xidhitaanka Trestolone oo leh Dianabol waxay ku dambayn kartaa ilaa 20 rodol oo muruq ah toddobaadyada 6. Dianabol sidoo kale waa faa'iido sababtoo ah waxay leedahay cufnaan iyo culeys ballaaran oo aan lahayn mudis.
Deca-Durabolin, oo sidoo kale loo yaqaan Nandrolone, ayaa loo isticmaalaa in lagu xoogsheegto shakhsiyaadka doonaya raadinta wadajirka dhakhso leh iyo dib u soo kabashada muruqyada. Waxay sidoo kale faa'iido u leedahay daaweynta wareegga dhiigga sababta oo ah waxay gaabinaysaa isticmaalka tamarta. Daawada steroidkani leeyahay waxyeelooyinka ugu yar ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa wada jir ah iyo steroids androgenic sida Dianabol.
Trenbolone wuxuu leeyahay awood dhexdhexaad ah iyo awoodna leh waxaana loo istcimaalaa bulking wareegga jirka jirdhiska sida goynta. In kasta oo ay leedahay awood sare, hadana waxaa laga yaabaa inaysan faa'iido u lahayn bodybuilder culus oo isu diyaarinaya tartan. Waa lagu dhejin karaa wareega wareega kasta.
10.Trestolone Acetate (MENT) faa'iidooyin
Trestolone acetate ayaa ku jira suuqa sababta oo ah awooddiisa taas oo ay xaqiijiyeen falanqeeyayaasha caafimaadka waxaana sidoo kale caan ku ahaa adkaynta tayada. Trestolone acetate waxay leedahay faa iidooyin badan oo kala duwan, gaar ahaan dadka doonaya inay dhameystiraan caafimaadkooda sidoo kalena gaaraan hadafkooda jimicsiga. Waxaa ugu sarreeya ee lagu taliyay in lagu caawiyo horumarka muruqyada iyo sidoo kale miisaanka oo yaraada. Steroidku wuxuu u oggolaanayaa adeegsadayaashu inay helaan baruur jilicsan oo jirku ku badan yahay. Qaar ka mid ah kuwa ugu sarreeya Trestolone Acetate (MENT) faa'iidooyin la xidhiidha Trestolone acetate waxaa ka mid ah:
· Trestolone acetate ayaa caan ku ah inuu si dhakhso leh u shaqeeyo steroids kale. Trestolone acetate ayaa si dhakhso leh u soo bandhigta natiijooyinka duritaanka ka dib. Isticmaalayaasha ayaa soo sheegay in isbeddel muhiim ah ay ku yeeshaan murqaha jirka ka dib markii ay qaateen qiyaasta. Si la yaab leh, natiijooyinkiisu waa muddo-dheer, isla markaana adeegsadayaashu ma aha inay ka walwalaan dib-ugu-durida naftooda si ay u ilaashadaan muruqyadooda. Daawada waxay soo bandhigtaa toban jeer in ka badan saamaynta myotopic ee testosterone taas oo ka dhigaysa inay kordhiso heerka ay ka kooban tahay dhismaha murqaha ka sarreeya kuwa kale ee steroid ka ah suuqa.
· Trestolone acetate waxaa loo isticmaali karaa daawo kale oo loogu talagalay goynta iyo kartida ay u leedahay goynta ayaa si weyn loo xoojiyay. Daawadu waxay leedahay astaamo u gaar ah sida inay ku dhejiso prohormones kale oo ka caawiya hagaajinta wareegga goynta, sidaa darteed ugu shaqeynta qof doonaya inuu ka takhaluso unugyada jilicsan isla markaana gubto dufanka.
· Trestolone acetate ayaa la ogaaday inay waxtar u leedahay wareegga bulking. Daawooyinka waxay u oggolaadaan adeegsigeedu inuu heysto heerarka haynta nafaqada ee aadka u sarreeya taasoo ka caawineysa iyaga inay kor u qaadaan sameynta murqaha. Daawadu waxay sidoo kale wanaajiso bodybuilders-ka si ay u ilaaliyaan xaaladda anabolic ee jirka.Hagaha Ultimate ee Nolvadex si loo daaweeyo kansarka naasaha
· Isticmaalka Trestolone acetate wuxuu kordhiyaa awooda jirka ee sameynta borotiinka. Sidaas darteed, dawadu waxay si dhakhso leh u gaartaa koritaanka unugyada muruqyada maxaa yeelay borotiinadu waxay u shaqeeyaan sidii unugyada jirka.
· Daawaddu sidoo kale waxay kordhisaa heerka xoogga. Kordhinta heerka xoogga ayaa ka caawisa isticmaalayaasha inay horumariyaan awoodaha tababarka si adag oo dheer. Intaa waxaa dheer, kor u qaadista heerarka xoogga waxay ka caawineysaa jir dhiska inay soo gaabiyaan biririftooda, sidaasna waxay ka caawineysaa inay si joogto ah u shaqeeyaan.
Si ka duwan dawooyinka kale, Trestolone Acetate Uma beddelo estrogen. Estrogen-ku wuxuu leeyahay waxyeelo waxyeello u geysaneysa jirka nin, sida inuu sababa kacsi la'aan, daal, iyo murqaha oo luma. Si kastaba ha noqotee, MENT markii la qaaday waxay door ku yeelataa doorka 'testosterones' ee jirka isticmaaleyaasha sidaasna waxay ku badbaadinaysaa waxyeelada xun ee estrogen-ka.
· Sidoo kale, si ka duwan steroids badan, dawadu uma beddeleyso DHT. Sidoo kale, steroid-ka ayaa kordhiyay awoodda sida uusan ugu xirneyn galmada hormoonnada-galmada globulin (SHBG).
11. Trestolone Acetate (MENT) dib u eegis
Trestolone Acetate ayaa had iyo jeer loo yaqaanay steroid anabolic aad u xoog badan oo waxtar leh. Dad badan ayaa u isticmaalay Trestolone Acetate dhismaha jirka dhismooyinka dawooyinka ee dhisida muruqyada iyo sidoo kale ujeedooyin caafimaad. Dadka noocaas ah waxay muujiyeen sida ay ugu qanacsan yihiin daawada iyada oo loo marayo dib-u-eegistooda macaamiisha wanaagsan. Kuwa soo socdaa waa qaar ka mid ah dib u eegista isticmaala ay qoreen isticmaaleyaasha noocan ah:
Nick waa jir-dhise jir 27 jir ah waana halyeey adeegsade budada Trestolone ee dhismaha. Nick wuxuu adeegsaday badeecadan sideed bilood, wuuna ku faraxsan yahay natiijada. Wuxuu sheegay in dawadu ay siisay natiijooyin sax ah siduu doonayay. Nick wuxuu sii wadaa inuu helo murqo badan oo cajiib ah oo aan laheyn waxyeelo. Wuxuu ku faraxsan yahay in dawadaasi aysan siin wax lumis ah oo ah rabitaanka cuntada, niyadda. Dhibaatada kaliya ee Nick kala kulmay steroidkani waa dhididka habeenkii iyo hurdo la’aanta qaar. Nick wuxuu ahaa astaamaha dhismooyinka jirka ah, Nick waxaa loo adeegsan jiray dhinacyadaas mana uusan helin isagoo walwal badan.
Greg waa isticmaale kale oo faraxsan oo Trestolone loogu talagalay dhisida jidhka. Greg wuxuu adeegsan jiray dawadan wuxuuna hada marayaa qeybtiisii ​​labaad kadib qaliinka wareegga kadib. Wareegtiisii ​​labaad, ayuu isweydaarsanayay, natiijooyinka waa kuwo aad u fiican. Greg wuxuu qorsheynayaa inuu bilaabo jaridda isla marka uu dhammeeyo wareegga. Greg wuxuu sheegay inuu bilaawday caaqil bilawgiisii ​​wuxuuna ka baqay in dawadan ay waxyeelo khatar ah kuqaato jirkiisa. Si la yaab leh ayuu u qaatay, dawada waxay noqotay mid ka mid ah steroidsyada ugu fiican ee uu waligiis isticmaalo. Daawada waxay siisay awood sare, jimicsi aad u fiican, waxayna awood u siisay inuu dhiso muruqyo badan. Greg wuxuu aad ugu han weyn yahay daroogada wuxuuna sheegay inuu ku talin lahaa qofkasta.
Clinton waxay dareemeysaa farxad inay la wadaagto khibradeeda Trestolone Acetate natiijooyinka wanaagsan ee uu ka helay muddo kooban gudaheed iyo qiyaasta yar ee daroogadaan. Clinton ma aha culeys culeys ama dhisme dhise laakiin waa naqshadeeye nashqadeeya xiise u leh jirdhis aad u fiican iyo jir dhis. Wuxuu adeegsaday dawadan muddo ku dhow hal sano, aadna wuu ugu farxay in aan ahayn muruqyada caatada ah iyo jir muuqaal leh, dawada ayaa waliba ka caawisay in uu fiicnaado libido, fayoobaanta, iyo maqaarka jilicsan. Daawada ayaa sidoo kale ka caawisay inuu yareeyo dufanka jirka, taas oo isaga farxad gelisa. Clinton waxay ku talajirtaa inay sii waddo adeegsiga dawadan maaddaama aysan wax dhibaato ah ku qabin.
12.Trestolone Acetate (MENT) budo iib ah
Soosaarayaasha Trestolone Acetate waxay xaqiijiyeen in badeecadu ay tayadiisu sarreyso. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dad badan oo ku jira suuqa madow iyo sheybaarka dhulka hoostiisa oo iibiya alaab tayo hooseysa iyo qiimo hooseeya. Qaadashada Trestolone Acetate oo tayo hoose leh ayaa laga yaabaa inay ku keento waxyeelooyin aan wanaagsanayn sida kansarka qanjirka 'prostate'. Sidaa darteed, iibsadayaasha iyo isticmaaleyaasha sheygan ayaa u baahan inay taxaddaraan inta ay wax iibsanayaan Budada Trestolone Acetate (MENT) oo iib ah.
Sababtoo ah caannimadeeda iyo kororka tirada dadka ee qiimeeya ama doonaya inay gaaraan jimicsi jireed, daroogada ayaa lagu heli karaa meelo badan oo kala duwan. Faa'iido dheeraad ah oo daroogada ah ayaa ah in la heli karo sida ugu qiimo jaban marka loo eego steroids kale. Dadka wax iibsanaya ee raadinaya inay iibsadaan budada inta badan helitaanka sheyga qiimo hooseeya. Shayga waxaa lagu iibiyaa laba nooc, oo ah saliida saafiga ah ee horay loo iskugu daray ee 100mg / ml iyo budada '99% pure Trestolone Acetate'.
13. Halka laga iibsado budada Trestolone Acetate (MENT)
Trestolone Acetate waxaa laga heli karaa ganacsatada caalamiga ah ee laga heli karo goobo kala duwan oo caalami ah sida Shiinaha, Mareykanka, Kanada, Brazil, iyo Mexico. Ganacsadayaashan caalamiga ah ayaa dawadan ka dhigay websaydhkooda si kuwa wax iibsada ay ugu iibsadaan aaggooda.
Sidoo kale, waad awoodaa sidoo kale soo iibso budada Trestolone Acetate (MENT) laga bilaabo goobaha kale ee tooska ah ee qiimaha caddaanka ah, Mid wuxuu kaloo iibsan karaa Trestolone Acetate (MENT) oo laga iibsan karo ganacsatada maxalliga ah laakiin waxaa lagaa digayaa hubinta tayada halka aad wax ka iibsaneyso maxalliga maadaama been abuurku buuxiyeen suuqa. Iibsadeyaashu badanaa waxaa looga baahan yahay inay iibsadaan sheyga websaydhada shirkadaha aasaasay halkii ay ka isticmaali lahaayeen ilaha kale ee internetka, iyo Trestolone Acetate (MENT) adeeggeeyaha si loo hubiyo inay helaan wax soo saar tayo leh.
Trestolone wuxuu ku helay sumcad aad u macquul ah xagga dhismaynta jirka iyo ujeedooyin kale oo caafimaad, sida ka hortaga uurka. Daawadan ayaa ah wali steroid-ka ugu awooda badan suuqa iyadoo caan ku ah awooddiisa sarre. Dawadani waxay leedahay faa iidooyin badan oo adeegsadayaasha, waana mid aad waxtar u leh. Isticmaalayaasha dawadan waa inay dhawraan jadwalka qaadashadooda, xisaabinta nus-nolosha, iyo sidoo kale joogteeynta jimicsiga joogtada ah iyo cunnooyinka habboon. Haddii aad dooneeyso inaad iibsato Trestolone oo ah dhisme-dhiska, waxaad booqan kartaa websaydhka buyaas.com si aad u meeleeysid amarkaaga oo aad u weydiiso macluumaad dheeraad ah.
1. Drake Ellen, Drake Randy; Erayada Daawada Daawada, (2006) p.682
2. Dhulal; Qaamuuska Daawooyinka; Xogta Kiimikada: Xogta kiimikada, Qaab dhismeyaasha, iyo buuggaagta. (2014) p.538, 588
3. Legato Marianne; Mabaadi'da Daaweynta Jinsiga-Gaarka ah, (2009) p.363
4. Yalkowsky Samuel, He Yan, Jain Parijat; Buug-gacmeedka Xogta Xalka Aqueous, (2016) P. 1567
5. Zayas Hilda; Qaamuus-qorista Kiimikada & Daawooyinka Isbaanishka, (2005). P. 268